SEO: Ọnwụnwa Njikọ 10 Iji Zere | Martech Zone
SEO: Ọnwụnwa Njikọ 10 Iji Zere
Tọzdee, Nọvemba 5, 2009 Monday, September 21, 2015 Adam Obere
5 ″ /> Ọla edo nke Google nke ma ọ kwesịrị ma ọ bụrụ na websaịtị ga - ahọrọ nke ọma na - aga n'ihu na - agbanwe oge, mana ruo oge ụfọdụ usoro kachasị mma agbanwebeghị backlinks si ziri ezi, ikikere saịtị. Na nyocha Nchọgharị Nchọgharị na ọtụtụ ọdịnaya dị ukwuu nwere ike ịdebanye aha gị na saịtị maka mkpụrụokwu aha, mana backlinks dị mma ga-eme ka ọkwa ya dị elu.
Ebe ọ bụ na backlinks abụrụla ihe ahịa ama ama, ọtụtụ njikọ aghụghọ na ọrụ na-aga n'ihu na-apụta na weebụ niile. Emela ka obi sie gị ike n'iji ego maka ọrụ ndị a. Ọbụghị naanị na ị gaghị emezi ogo gị, ị nwere ike itinye weebụsaịtị gị na nnukwu ihe ize ndụ nke ịdata na ndekpọ injinị ọchụchọ.
Ee, enwere ụdị ihe dị ka njikọ na-adịghị mma inbound.
Nke a bụ ndepụta ngwa ngwa nke ụfọdụ ụdị njikọ ị chọghị ịtụ aka na weebụsaịtị gị. Ndepụta a agaghị enwe mgbagwoju anya na njikọ ndị na - agaghị agabiga uru dịka njikọ yana rel = ”nofollow” àgwà.
Emela njikọ site na saịtị ndị na-egosipụtaghị ree ederede ederede.
Adịghị azụ n'ime njikọ ugbo. May nwere ike na-agba ọsọ gafee azụmahịa dịka, nweta njikọ 1000 maka $ 29.95 kwa ọnwa. Zere mmemme ndị a.
Zere na-ewu ewu njikọ agbanwe dị ka text-link-ads.com ma ọ bụ textlinkbrokers.com. Ndị a na-azụ ahịa ga-erere gị njikọ ederede site na ebumnuche nke imetụta nsonaazụ ọchụchọ Google. Nke a bụ imebi iwu Usoro Ọrụ Google.
Ga-ahụ ndị ọrụ na webmaster na-ewu ewu forums àjà na-ere elu pagerank njikọ. Ejiri ọtụtụ saịtị ndị a site na ịzụta ngalaba gafere na elu Google PageRank ụkpụrụ na ngwa ngwa itufu ebe nrụọrụ weebụ template na obere ihe bara uru / ọdịnaya pụrụ iche. Saịtị ndị a agaghị ejigide ụkpụrụ PageRank ndị a ozugbo Google ghọtara na ha agbanweela ikike na ọdịnaya. E nwekwara ọtụtụ ụzọ Google nwere ike isi chọpụta na saịtị ndị a dị mfe na-ere njikọ.
Gbaa mbọ hụ na njikọ gị sitere US dabeere na ezubere iche weebụsaịtị ọ bụrụ na ahịa gị niile dị na US.
Reallychọghị njikọ kere site na software spam. Imirikiti sọftụwia a na - ahapụ akara ukwu ọ dịkwa mfe Google ịmata.
Reallychọghị njikọ site na junk weebụsaịtị. Ndị a bụ saịtị dị ka saịtị mmekọ nwere obere ma ọ bụ enweghị ọdịnaya pụrụ iche.
E biputere njikọ nke saịtị spam gbasara atọ P (porn, ọgwụ na egosighị mmetụta). Oge.
Zere ọnwụnwa nke ikenye njikọ na nnọkọ nke onye nwe ya na-ejighịzi nke ọma na nke ahụ bụ jupụtara na spam.
Zere ọnwụnwa ịgbakwunye na bipụta URL gị na njikọ memes. A meme bụ ndepụta na-eto eto nke njikọ ndị na-esi n'otu saịtị gaa na nke ọzọ maka naanị nzube nke ịkekọrịta njikọ na ibe akwụkwọ gafee ndepụta nke ndị sonyere.
Ndị a bụ nanị iri nke ụdị njikọ ị na-achọghị, mana ndepụta a bụ ọ bụghị niile gụnyere.
Tags: backlinksikwu okwu spamkubie ume, na ngalaba njikọnjikọ agbanwenjikọ ugbonjikọ memesnjikọ spamnjikọere njikọspam
Gị Bloated weebụsaịtị bụ Disqualifying-eduga ná
Na Search, Nke Abụọ Bụ Dị The Mbụ Loser
Nov 6, 2009 na 5:37 AM
@diiannaa jụrụ kwa # 3: Kedụ ka Google ga - esi nwee ike ịkọ ma ị na - azụ njikọ?
Nov 6, 2009 na 7:46 AM
Nnennen, ndụmọdụ siri ike.
Nov 7, 2009 na 5:42 AM
Ndị ọzọ na-ede blọgụ egosila na tupu i gosipụta nzụta gị, enyere gị weebụsaịtị / ibe ebe njikọ gị ga-aga ka ọ dịrị ya mfe maka onye otu Google spam ga-enweta ozi a. Enwere ụzọ ziri ezi iji wuo njikọ ndị anaghị achọ ịkwụ ụgwọ na-aga n'ihu iji jikọta ndị na-ere ahịa…
Mee 7, 2010 na 1: 47 AM
kedu maka iji otu n'ime ọrụ ndị a iji zụta njikọta spammy n'ezie na saịtị ndị na-asọmpi nke a họọrọ karịa gị, na-enwe olileanya na google gbadata akara ogo ha?
Mee 9, 2010 na 12: 15 PM
Google anaghị ata ahụhụ ngalaba maka backlinks spammy. Ọ bụrụ na nke ahụ rụọ ọrụ, azụmaahịa ga-emebi ogo njikwa injin ibe ha. Ọ bụ ya mere naanị na-eleghara ha anya kpamkpam.
Feb 2, 2011 na 11:58 PM
Echere m na ọ rụchara ọrụ ya.
Aug 29, 2011 na 7:28 PM
Ọ bụ ihe na-adọrọ adọrọ inye n'ime "ọchịchịrị" nke SEO wee malite iwu wiilị njikọ njikọ spammy ahụ, ma ọ bụ nyefee PLR ​​nke ọma na puku kwuru puku akwụkwọ akụkọ, wdg, wdg. O yiri ka onye ọ bụla ọzọ na-eme ya, ma nwee ihe ịga nke ọma na ya . Mana ahụmịhe m bụ na Big G na - ejide ma mebie njikọ ndị a - ọ bụghị na ha bara nnukwu uru ịmalite. Akwa post BTW.
Jun 3, 2012 na 8:39 AM
Echiche ahụ masịrị m nke ukwuu.